पाथिभारा माताले सबैले कल्याण गरुन ! आज जेष्ठ ११ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस – Complete Nepali News Portal
पाथिभारा माताले सबैले कल्याण गरुन ! आज जेष्ठ ११ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस
ScotNepal May 25, 2021
जीवन साथिको साथ सहयोग द्वारा ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । नयाँ कार्य थालनिको सम्भाबना रहेकोछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सामान्य मान सम्मान प्राप्तीको सम्भाबना रहेकोछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनोरञ्जनका श्रोत्र र साधनका श्रेत्रमा सामान्य खर्च बढ्न सक्नेछ ।